အလျှော့မပေးတတ်သောဂန္ထဝင်: SR (Sexy Rugby) အမျိုးသားတီရှပ် | ရပ်ဘီဆိုင်: Sexy Rugby
ကြိုဆို » စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးဂန္: အတီရှပ်လူကို SR (Sexy ရပ်ဘီ)
သတိပေး, သင်ချစ်စေခြင်းငှါ ဒီကောင်းတဲ့ရှပ်အင်္ကျီ, ဂန္ထဝင်နှင့် timeless ။ ဒါကအခြေခံယောက်ျားမဆိုအခါသမယသည်ရာသီအတွက်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ High-end ချောအဆိုပါပေါ်တွင်သင်မှမရရှိနိုင်ပါအရောင်များ၏ကျယ်ပြန့်ကဲ့သို့, သငျသညျသှေးဆောငျပါမညျ sexy ရပ်ဂ်ဘီအဝတ်အစားစတိုးဆိုင်။
ဤသည်ရှပ်အင်္ကျီ, လူအပေါင်းတို့အဘို့ဖြစ်၏ထိုလူအပေါင်းတို့ကိုယျခန်ဓာ! ခုနစျပါးအရွယ်အစားတစ်ဦးစုစုပေါင်းရရှိနိုင် (S, M, L, XL, XXL နှင့် 3XL 4XL), ဒီရှပ်အင်္ကျီကို double ချုပ်ချုပ်ရိုးတွေနဲ့ပြီးသွားအားလုံး၎င်း၏သက်သာခြင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လူနှင့်၎င်း၏ High-end အကျိုးရှိမည်။ Heather မီးခိုးရောင်, ဖိုက်မီးခိုးရောင်, အဖြူရောင်, အနက်ရောင်, အနီ, ရေတပ်, အစိမ်း, တော်ဝင်အပြာနှင့်အဝါရောင်, ကောင်းကင်ပြာပြာ, khaki အစိမ်းရောင်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်အပြာ: Sexy ရပ်ဘီစတိုးဆိုင်တွင်ပြုလုပ်နေသောတစ်ဒါဇင်အရောင်များအတွက်လာ diva!
ဤသည်ရပ်ဂ်ဘီအဝတ်အစားအဓိကလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တယ် sexy ရပ်ဘီဆိုင်။ နှင့်အညီ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘက်စုံသုံးနှင့်၎င်း၏ရိုးရှင်းသောစတိုင်နဲ့အတည်ပြု။ ဒါဟာ 100% ထဲမှာပါတဲ့ပါဝင်သောဟဲလ် Grey က မှလွဲ. 15% ဝါဂွမ်းပါဝင်ပါသည်။ ၎င်း၏ texture ကြီးမြတ်ခုခံ (185 g / m²) ၏ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏ဖြောင့်ဖြတ်မှုနှင့်အတူကအားလုံးကိုဖို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှစ်သိမ့်ပေးထားပါတယ်။ မိမိအဝါဂွမ်းများကိုရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်ပင်နွေရာသီအတွက်ဝတ်ဆင်ရန်ကူညီပေးသည်။
ဤသည်ရှပ်အင်္ကျီအားလုံးအခါသမယများအတွက်ဝတ်ဆင်နိုင်မယ့်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ရှင်ဂန္ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းအမျိုးမျိုးသောစတိုင်များမှတဆင့်တစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံး။ အခါတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ဂန္စတိုင်နွေရာသီသို့မဟုတ်ဂျင်းဘောင်းဘီအတွက်ဘောင်းဘီတိုထဲမှာသူ့ကိုအတူလိုက်ပါ။ အေးလာသောအခါ, တစ်ဦးနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကြည့်တက်အသက်ဝင်စေဖို့ ချွေးထွက်အမျိုးသားများအတွက် Sexy ရပ်ဘီ သင့်ရဲ့ရှပ်အင်္ကျီနှင့်လိုက်ဖက်။ ထို့ကြောင့်အမြင်တညီတညွတ်တည်းသည်နှင့်ယောက်ျားကချစ်ကြတယ်။ အားလပ်ရက်များအတွက်သင်နှစ်သက်သောသူတို့အဖို့ကဝေငှပြီးတစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးဝတ်ဆင်ရန်ရောင်စုံအပိုင်းပိုင်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဗီရိုမြှင့်တင်ရန်,
ရှပ်အင်္ကျီစပျစ်သီးe အသစ်က sexy ရပ်ဂ်ဘီစုဆောင်းမှု
ရပ်ဂ်ဘီအဝတ်, လက်ဝှေ့သမား, t-ရှပ်အင်္ကျီ, hoodies, ပိုလိုရှပ်အင်္ကျီ, ဆက်စပ်ပစ္စည်း
Sexy ရပ်ဘီတွင် "ပြီးခဲ့သည့်နာရီကိုချွတ်
လက်ဝှေ့သမား retro လူတို့, Sexy ရပ်ဘီအားဖြင့်ဂန္ "